Susa.bg: Susa Izizinda Zesithombe Kuma-Headshots, Abantu, Nezinto Ngokungenaphutha nge-AI | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 30, 2020 Lwesibili, Disemba 22, 2020 Douglas Karr
Uma ungalandeli UJoel Comm, kwenze. Manje. UJoel ungomunye wemithombo engiyithandayo kwezobuchwepheshe. Ubala, uthembekile, futhi ubala ngendlela emangalisayo. Alukho usuku oludlulayo engingabheki kulokho akutholile ngokulandelayo… futhi namhlanje bekungumkhuba omkhulu!
UJoel wazise wonke umuntu ngethuluzi elisha online, khipha.bg. Ithuluzi lisebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukuhlaziya izithombe nabantu bese lisusa isizinda ngokunembile nangokunembile.
Uma uke wazama ukukwenza ne-Photoshop, uyazi ukuthi kuyinto embi kanjani. Ngaphandle kokukhethwa kwe-eraser ye-Photoshop, ngisho ne magic izinketho, azisondeli nokusondela. Ukubuka umsebenzisi omkhulu we-photoshop sula izizinda kuhle kakhulu.
Angizukukunikeza nesifundo sokuthi kanjani ngoba ngiyethemba ukuthi angisoze, naphakade, ngiphinde ngisebenzise lokho kusebenza. Nasi isivivinyo engisanda kusilayisha ukuze ngisuse.bg. Bengifuna impela ukuyivivinya kahle - akukho okusondelayo nemininingwane eminingi yangemuva.
Susa isendlalelo esithombeni seqembu labantu
Nawu umphumela omangalisayo:
Injini yaze yalisusa ibhayisikili! Isithombe esilungisiwe siphinde salungisa usayizi namamajini ukubeka isithombe ngokuqonde ngqo nangokuvundlile. Kuyamangalisa nje!
Susa isendlalelo ku-Headshot
Susa ingemuva kuLogo noma enye into
Nakuba Remove.bg ekuqaleni yayenzelwe ukususa izizinda kusuka kuma-headshots nakubantu, baguqule ama-algorithms abo ukuze ukwazi ukulayisha cishe noma yisiphi isithombe kwinsizakalo futhi izosusa isizinda ngokuhlanzeka. Ngikusebenzise kaningi ngalokhu futhi kusebenze kumnandi!
Susa amathuluzi angemuva kwesithombe ne-API
Ithuluzi le-Inthanethi lokususa izizinda - Ilungele ukucutshungulwa kwesithombe esisodwa nokuhlolwa ngaphambi kokuqalisa i-batch, i Rkhanibe.bg iwebhusayithi iyindlela yezivakashi eziningi. Futhi izithombe zokubuka kuqala zihlala zimahhala! Lapha uzothola nesihleli esikuvumela ukuthi ushintshe umbala noma isithombe sangemuva.
Ithuluzi ledeskithophu ukususa izizinda - Ideskithophu yohlobo lwe-remove.bg ye-Windows, Mac, noma i-Linux ikunikeza ukulawula okwengeziwe. Isibonelo, ungakhetha ifomethi yokukhipha. Futhi ilungele ukucubungula izinqwaba zezinkulungwane nezinkulungwane zezithombe ngokulandelana: zilungele uma uthengisa online noma usebenza ngokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi.
Photoshop Extension Susa Backgrounds - Uyazichaza! Susa izithombe ngaphakathi kwesoftware yokuya kusithombe ngaphandle kokuphazamiseka ngamathuluzi akhelwe ngaphakathi. Konke ukusikwa okwenziwe ku-Extension kuza nesifihla-ngqimba esihlelwa ngokuphelele sokuhlelwa okunwetshiwe.
I-API yokususa izizinda zesithombe - I-API yisisombululo esiguquguquka kakhulu esisinikezayo. Ungahlanganisa ukuhlelwa okunwetshiwe ukuze uthole ukulawula okugcwele kokukhishwa nokuqhutshwa kwe-batch cishe kunoma yikuphi ukuhamba komsebenzi. Futhi umphakathi wethu usuvele wakhe uhla oluhle lwama-plugins aselungiselelwe we-Figma, WooCommerce, Sketch, ne-Visual Studio Code.
Izinketho zamanani zifaka izinhlelo zokubhaliselwe futhi ukhokhe njengoba uhamba.
Zama Susa.bg Manje!
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana se- Remove.bg kulesi sihloko.
Tags: aiUhlelo lokusebenza lwe-Android lususe isizinda sesithombeApiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaDrupali-figmaLinuxIzithombehopisandiso se-photoshopsusa ingemuvasusa i-api yangemuvasusa isendlalelo senhlokosusa ingemuva lesithombesusa ingemuva lelogosusa isizinda sabantukhipha.bgSketchwindowsWooCommerce